Maansadii Iswaydiin WT: Mahad Ahmed Dhoore(Hadhwanaagnews) Thursday, October 25, 2012 Gabaygan iswaydiin waxa uu madaxayga kasoo maaxday xilli aan safar bas ku dhex marayay magaalada London waxa uu xambaarsanyahay <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 25th Oct 2012
Gabaygan iswaydiin waxa uu madaxayga kasoo maaxday xilli aan safar bas ku dhex marayay magaalada <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />London waxa uu xambaarsanyahay dareen si dhaba ugaga soo go?ay qalbigayga. Waxaan kasoo baxay gurigayga anoo ku safrayay baska dadwaynaha. Kadibna waxaan baska dhexdiisa kala kulmay qisada igu dhalisay maansadan. Waxaa baskii ila soo fuulay afar qof oo Soomali ah oo marxalado kala duwan ku jira kaddibna waxaan
sawirantay marxalada guud ahaan Soomaalidu ku jirto gaar ahaana kuwa qurbaha. Afarta qof waxay kala ahaayeen sidan.
1. Hooyo Soomaaliyeed oo wadata afar caruura oo malaha qiyaastaydii isku nuug wada ahaa, labo kamida waxay saaraayeen pushchair(gaariga lagu riixo caruurta) halka labada kalana ay dacallada ku dhaganaayeen hooyada. 2. Waxaa sidoo kale baska soo fuulay gabar Soomaaliyeed oo dhagaha xarigga Telfoonku ugu jiro kuna mashquulsan shaashadiisa isla markaana qabta wax aad moodo xuub caaro hase ahaatee ay dhar ahaan u qabto wallow wax u qarsoonaa ay yaraayeen.
3. Waxaa asaguna baska dhinaciisa kasoo galay wiil Soomaaliyeed qiyaastayda da?da kaga jiray qaybta sare ee labaataneeyada(25-29). Wiilkaas waxa asagana ka muuqday dayacaad dhanka labiska ah surweelkiisa waxaad moodaa inuu ka dhacayay walow uu si ula kac ah dabada uga riday.
4. Waxaa asaguna dhinaciisa baskii soo fuulay Aabe Soomaaliyeed oo marxalad intaba ka duwan ku jira waxuu ku jiray xaalad marqaan, daankaa qomboray,indhahaa tooshka ahaa caleemo cagaaran ayuuna sida qudraddii dalamsanayay waad dareemaysaa inuusan ugu yaraan dhowr habayn hurdo ladin.
Xaalada noocaasa markaan arkay waxay igu noqotay qaflad, waxaa ii sawirmay intoodaas oo hal guri kasoo wada toosay, dabadeedna quus ayaa ii soo baxay iyo guri ba?ayoow yaa kuleh. Iswaydiimo ayaa igu dhashay waxaan is iri waxan oo qarribaada iskama dhicine yaa masuul ka ahaa? Yaa doorkoodi gabay? Lama huraan waxaa ii noqotay inaan jawaab helo nasiib darose cid aan sheeko wadaag nahay baska ilama saarayn, la hubaayoo su?aalo waa ku beer goyn lahaa waxaa naftaydii ku qanciyay bal hadii illaahay igu hibeeyay inaan maanso samayn karo inaan dareenkaas la wadaago dadkayga. Halkaas ayaan ka bilaabay MAANSADA ISWAYDIIN. Aniga ayaa isu jawaabay waxaan iska dhigay laba qof.
Da?da gabaygiyo hiddaha
Daraandarin sheeko wacan
Waxaa daadihin yaqaan
Ruuxii u daacadoo
Dadkiisa waxii ku dhaca
Dalool kaga dhigo wadnaha
Asagana ay damaq ku yiin
Waxaa maanso dabi yaqaan
Danyste midaan ahayn
Nin door aan hadalka dadin
Waxii danta guud ku wacan
Daalacan barqankii ka dhiga.
Maantana waa door haldhaa
Iwaydii weeye dadan
Nin dooraan waxaan ku iri
Dalkeenoo nimcadu dhextaal
Durduurto sida wabiyadii
Daruufta na haysatiyo
Dulligan maxaa na baday
Nindoor waa jawaabayoo
Waxuu yiri daacadow
Dalkeenoo nimcadu dhex taal
Dawarsiga shisheeyihiyo Duruuftan waxa na baday
Dadnimadaa inaga maqan.
Waxaan iri haldoorikiyow
Dadkii garashada qabiyo
Duubkiyo aqoonyahanki iyo
Da?yartii maxaa ku dhacay.
Dadku isma wada surnee
Duubkii afar jeeble noqoy
Waxuu awal dayasho laa
Xaaraantuu hada dalamsadaa
Dookhii bulshadaba ka baxe
Daanyeer cidi kama taqaan.
Aqoonyahan waa dayuus
Dam?iga umaddiis ka bixi
Ayuu darajada sariyo
Dallacaad ku raadiyaa Dalkaas wada gubanayana
Dan iyo daarad kamaba galo.
Hooyadii waa daalantahay Doorkii aabahay kabtaa
Ayadu waa daahiroo
Danbiyo eed toona maleh.
Da?yartii waa waalantahay
Intooda dalkii ku nagi
Asaagood daar uu dhistiyo
Dhoofbaa maankii ka galay
Intoodii dibadda timid
Surweelkaa dabada mari
Asagoo fursadii dul naggi
Deel iyo daal makala yaqaan
Da?da asagoon yarayn
Ayuu dacayaha lulaa
Saqiirka ka dood xunyahay.
Waxaan iri haldoorkayow
Dadkii wada gaartayoo
Dooddii waadigaan shidoo Wiilashii waadigaan duree
Aniguna aan yara didshee
Hablaha dibadaha ku badan
Diintii maxay uga tageen
Dhaqankii u dooriyeen?
Maxay cawradii dadnayn
Dibadaha usoo dhigeen?
Waxuu yiri horda daacadow
Dadkii qaybaa ka dhaqan
Kuwaa daa?im nuurshayoo
Diinteenii wada bartoo
Dushaa quraankii ka dhiga.
Hayeeshee dooda gar lehe
Diintii waxay uga tageen Dhaqankii u dooriyeen
Waaridkaa doorkoodi gabay
Waagii dalku noo nagaa
Daris iyo ehel baan lahayn
Da?yarta nala korin jiroo
Edabtooda door wayn kulaa.
Halkaan deeqow walaal
Daallin gaal daacuflaa
Daris iyo ehelba ahoo
Dantaadii qayb lagaaga xiray.
Xumaantaa daah lahayd
Inuu dadku kugu arkiyo Docdaa la iska eegi jiray
Halkaan waa ka duwantahoo
Dariiqay ceebtu taal
Darbiyaday isku dhuuqayaan
Khaniiskaa door lahoo
Bulshada dacal wayn ka gala
Oo daruusta u dhiga ardada.
Hadaba ilmihii dowrkaas ku koray
Khaniisku waa ruux dulliya
Daa?imkiis ma yeelayaa?
Waxaan iri haldoorkiyow
Doodda adigaa watee
Soomaalida dibadaha ku dhaqan
Guurkaa dudadii ku adag
Furiinkaa daad wararacee
Bal ayana noo daadahee.
Waxuu yiri daacadow Duddada guurkaan ku fudud
Daruufuhu qayb bay ka yiin
Wiilashi daadihin lahaa
Masuuliyad ma dareensanoo
Ayagoo da?dii ka wayn
Bay hadana doon wada yihiin
Waliba damac guur ku jiro
Gabdhahaa dulufkaas badoo
In xaflad loo daadahshiyo
Kharashbay dacalka ugu xireen
Docda kale aan galee
Furiinkan daad wararacdaa
Dulmanee kaligeed ilmaha
Daalaadhaca kula jirtana
Raggaa darxumada badoo
Doorkii aabuhu lahaa Ayuu barqankii dayacay
Qaadbuu daashyada ku cuni
Dulaankii noloshuu ka haray
Daa qoys uu daadahshee
Asagaa darbi jiif ku nool
Midkii aan daash ku jirin
Darxumo mowd ku dhawrahayn
Dantiisii uma qumee
Daalacan waagii baryaba
Dood aan hor u socod lahayn
Xabuub laga daadinayn
Unbuu dabadaas hayaa
Dangiigaa fadhi ku dirir
Darajadii eebbe siiyaybuuSiidaayoo dacal ka maray
Adigaa daa?in eebahay
Maskax kugu duugayoo Maansada noo dagal dhigee
Illeen caano daatay bari
Dabadoodaa la qaban jiree
Bulshada dawgee ku wacan
Dawada aan ka doonanaa
Bulshada dawgii ku wacan
Dawada ay ugu jirtaa
Waa dalkoo la xasiliyo iyo
Reerkoo dib loo rariyo
Diintoo da?yarta la baro
Qaadkoo la dabar jariyo
Aabahoo doorkuu lahaa
Dib u xasuustoo haatan gala.
M. A. dhoore
Laga helo: jjmahad@hotmail.com Friendly Link